Codso dhex portal shaqo | Shaqooyinka iyo khayraadka mustaqbalkiisa ciyaareed ka USAHello | USAHello
Ma u baahan tahay inaad codsato shaqo online? Shaqooyin badan ayaa lagu xayeysiiyaa online oo u baahan in aad codsato isticmaalaya shaqo portal online, ama website shaqada. halkan waxaa ku qoran 7 talooyin kaa caawin doona shaqo dalbanayso dhex portal shaqo.
Waa maxay portal shaqo?
portal shaqo A waa website shaqada. Loo-shaqeeyayaasha xayaysiin kartaa shaqo iyo shaqo ka raadsan kartaa shaqooyin. A portal waa iridda a, oo ah portal i onlines iridda ah oo wuxuu galay websites kale. portal shaqo A ma ahan oo kaliya shaqo raadinta. Iyada oo portal shaqo, waxaad soo gudbin kartaa codsiyada shaqada si websites badan shaqeeyaha.
LinkedIn, Indeed.com, iyo Monster.com waa portals ugu caansan shaqo weyn ee USA. Laakiin shaqo-bixiyayaal badani waxay sidoo kale leeyihiin portals shaqo iyaga u gaar ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin aad ku caawin aad codsato shaqo online marayo portals shaqo.
1. Shirkadaha Research on portals shaqo
Marka aad ogaato waxa shaqo aad rabto in aad dalbato, tag Glassdoor.com. Waxaad ka akhrisan kartaa warbixin ka shaqaalaha ka shaqeeya shirkada in. Mararka qaarkood waxay la wadaagi doonaan macluumaad ku saabsan waxa aad ka mid ah in codsigaaga.
Mar kasta oo aad aragto shirkad uu leeyahay doorka aad jeceshahay, meel ku qoro ganacsiga. Hayso liiska shirkadaha in ay diiradda saaraan. Hayso hubinta goobaha ay shaqooyin laga yaabaa in aad xiisayso.
2. Codso on gaar ah portal shaqada loo-shaqeeyaha ee
Haddii shirkadda uu leeyahay ay portal shaqo u gaar ah, dalban si toos ah halkii ay ka dhex website ah shaqada. Dalbashada si toos ah shirkadda ee website muujinaysaa shaqeeyayaasha in aad waqti u qaatay inuu booqo website iyo in aad xiisaynayso in ay shirkadda.
3. Habee aad resume iyo warqad dabool
Shaqada portal online weydiin doonaa macluumaad gaar ah. Waxay laga yaabo in aad weydiiso su'aalo ku saabsan waayo-aragnimo oo ay tahay in aad si toos ah nooca ay nidaamka. Laakiin had iyo jeer, waxay sidoo kale ku weydiin doonaa inaad geliyaan aad resume ama warqad cover.
Ma aha in aad soo gudbiso version la mid ah aad resume oo ku daboolaan warqad mar kasta oo. Akhri description shaqada iyo ka heli xirfadaha muhiim u shaqayso ay raadinayso. Haddii xirfad ku qoran yahay sida “loo baahan yahay” ama waxa lagu sheegay marar badan, waxaa muhiim ah. Hubi in la xuso in aad resume iyo warqad dabool sida aad isticmaashay xirfad in.
Sida caadiga ah, shaqeeyayaasha heli codsiyada badan oo liiska kasta on portal shaqada. Iyagu ma ay haysan waqti ay ku akhriyey oo dhan oo iyaga ka mid. “Dib u bilaabaan nidaamka raad” waxaa loo isticmaalaa si ay u caawiyaan waraaqaha habka loo shaqeeyo si degdeg ah. Kuwani waa nidaam computer in iskaan waayo hadalkii oo kale ku sharaxaadda shaqada iyo in waraaqahaaga. Taas macnaheedu waa waxaa muhiim ah in la isticmaalo luqad isku mid ah in aad warqad resume iyo cover sida waa in description shaqada. Baro sida loo warqad cover a, oo wuuna akhriyey Talooyin for resume weyn.
4. Hubi qaladaad!
Waxaa muhiim ah in lagu hubiyo qalad qoraal ka hor inta codsigaaga gudbisatay. Qaladaad soo diro farriin ah in aad tahay taxadar la'aan, oo qofna doonayo qof taxadar la'aan u shaqeeya. Waxaad weydiisan kartaa saaxiib ama xubin qoyska ah inay akhriyaan codsigaaga. Waxaad kaloo isticmaali kartaa Grammarly si uu u hubiyo wixii khalad ah. Grammarly waa lacag la'aan iyo iskaan doonaa dhammaan macluumaadka aad ku soo gashay in portal shaqo ee higaada iyo naxwaha qaladaad.
Hal hab si looga fogaado khaladaadka waa in ay ka koobanahay jawaabtaada meel kale on your computer ama qalab mobile - ma si toos ah bogga. Sidaas, aad si taxadar leh ka akhrisan kartaa jawaabaha aad iyo iyaga edit. Markaasuu, marka aad diyaar u, nuqul ka iyo iyaga paste galay portal ah.
5. Save jawaabaha aad soo gudbisay on portal shaqo
Qor ka mid ah jawaabaha aad u siiyaa codsi shaqo kasta oo aad soo gudbiso in portal shaqo. shirkadaha kala duwan weydiin su'aalaha kala duwan, iyo mararka qaarkood waa ay fududahay in la ilaawo wixii aad ku qoray. Waxaad u baahan doontaa in aad ogaato waxa aad u soo diray in portal shaqada haddii aad yeedhay waraysi. Markaasuu ku siin karaan tafaasiisha waraysiga u dhigma iyo dib waxa aad ku qoray.
Haddii aanu jirin hab si loo badbaadiyo jawaabahaaga si aad u arki karo, nuqul ka iyo paste jawaabahaaga oo meel kale on your computer ama qalab mobile ka hor inta aadan ka dhacay “soo gudbiyaan” ama “diri.”
6. La xiriir macalinka shaqaaleynta on LinkedIn
Ka dib markii aad codsiga soo gudbinaya, sugaan hal todobaad ama laba. Haddii aad dib u maqli ma, raadiso magaca tababaraha shaqaaleynta on LinkedIn ama bogga internetka ee shirkadda. isaga ama iyada fariin gaaban oo gaar loo leeyahay dir. U sheeg weli aad xiisaynayso shaqada iyo sababta aad uga ciyaar wanaagsan, waayo,. Mararka qaarkood, this ka caawisaa in codsigaaga dib loo eego.
7. Noqo joogto ah oo ma niyad jabin
The codsiyada aad soo gudbiso adigoo isticmaalaya shaqo portal online noqon doonaa mid ka mid ah dad badan oo shirkadda helo. Waxaa had iyo jeer waa wax badan oo dadka soo codsanaya shaqooyinka isla. Haddii aad si toos ah u codsan on shirkadda ee portal shaqo ama isticmaal mid ka mid ah website-yada shaqo raadinta, waxaad heli doontaa email xaqiijinta a. email waxaa kuu ogahay in codsigaaga la helay. Tani macnaheedu ma aha in qof ayaa horay dib loo eego codsigaaga. Waa jawaab toos ah mar kasta oo qof khuseysaa shaqo diray.
sida caadiga ah ma Waxaad maqli doontaa ka dib markii uu email in marka hore. Sida caadiga ah, loo shaqeeyaha oo kaliya ka jawaabin codsiyada portal shaqo ka dadka la soo xulay waraysi. Ha niyad jabin. Tani macnaheedu ma aha in aadan ahayn musharax wanaagsan. Waxa kaliya ka dhigan tahay in aadan codsatay shaqo sax ah weli. Ka codso shaqooyin todobaad kasta, xataa haddii aad leedahay wareysi soo.